ခွဲစိတ်ဆရာဝန်အလားအလာပထမဦးဆုံးလူ့ဦးခေါင်းအစားထိုးအမေရိကန်ဆရာဝန်များမှအစေးကို - သတင်း Rule
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ခွဲစိတ်ဆရာဝန်အလားအလာပထမဦးဆုံးလူ့ဦးခေါင်းအစားထိုးအမေရိကန်ဆရာဝန်များမှအစေးကို” Annapolis တွင်ဆမ် Thielman ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com စနေနေ့ 13 ဇွန်သည် 2015 12.38 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Annapolis တွင်အတွက် Westin Hotel မှာသောကြာနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင်, မေရီလန်း, သူ့အနားမှာပထမဦးဆုံးလူ့ဦးခေါင်းအစားထိုးများအတွက် volunteer နှင့်အတူ, ဒေါက်တာဆာဂျီယို Canavero သူ့ကိုအာရုံကြော၏အမေရိကန်အကယ်ဒမီနှင့်အရိုးအထူးကုခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်များ၏နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင်သူချင်းဆရာဝန်တစ်ဦးကပရိသတ်ကိုအနေဖြင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလုပ်ဆောင်ကူညီဆန္ဒရှိခွဲစိတ်စုဆောင်းဖို့ကြိုးပမ်းလုပ်.
ထိုထိုင်ခုံ၏အကြောင်းလေးပုံတစ်ပုံဗီဒီယိုကင်မရာများမှအပ်ခဲ့သည်, tripod နှင့်အလင်းအိမ်ရပ်တည်မှု. အခန်း၏ရှေ့တွင်မှသတင်းစာ-friendly ဆရာဝန်ရနိုင်ရန်အတွက်, တက်ရောက်လာတစင်မြင့်မိုက်ခရိုဖုန်းကို ယူ. Canavero န်းကျင် scrum သို့ခုန်ခဲ့: "'' Scuse ငါ့ကိုအ, စာနယ်ဇင်းများ, သင်ပယ် back မှငါချင်ပါတယ်, ကျေးဇူးပြု. လုံလောက်လောက်ပေ၏။ "
Canavero ရဲ့အမှာစကား၏ခေါင်းစဉ်ကသူလုပ်ဆောင်ဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကြီး လာမယ့်အတွက် 24 လများ, အရာသူဦးခေါင်း Anatomosis Venture တောင်းဆိုထားသည်, သို့မဟုတ် "ကောင်းကင်".
အဆိုပါသမားတော်ကြီးကိုယ်ပိုင်အဖြစ်မျှထိုကဲ့သို့သောအရာတစုံတခုရှိခဲ့ကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်, နှင့်သူ၏ပရောဂျက်၏နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ဘဝ extension ကိုကြီး.
နှစ်ဦးနှင့်တစ်နှစ်ခွဲနာရီ (ဆွေးနွေးတင်ပြချက်စီစဉ်ထားခဲ့သည် 90 မိနစ်) အများအားဖြင့်အပြာတစ်ပရိတ်သတ်ရှေ့တွင်- နှင့်မီးခိုးရောင်-တော်ပါတယ်လူလတ်ပိုင်းခွဲစိတ်, Canavero မုန့်အားမလျှော့အတွက်ရှည်လျားသောအခန်းရဲ့ width နဲ့အနီရောင်-အညိုရောင်အင်္ကျီ paced, bespectacled, သူ၏ဦးခေါင်းရိတ်, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်တင်ပါးဆုံရိုးဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးနှင့်တူရှာဖွေနေ.
သူတစ်ဦးဦးခေါင်းကိုအစားထိုးကုသမှုကိုထုတ်သယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်ဆိုသောသူဆာဂျီယို Canavero. ဓါတ်ပုံ: Youtube ကို
သူကအတွေးစကားပုံကတော့ပြီးနောက်အတွေးစကားပုံကတော့ပယ်ပစ်ခတ်ပထမနှစ်ဝက်နာရီအများစုမှာသုံးစွဲ, Kierkegaard နှင့် Arthur ကို C Clarke အပါအဝင်စာရေးဆရာများအားဖြင့်အချို့, သူ့ကိုယ်ပိုင်အကြံကိုကြံ၏အခြားသူများ.
"ကောင်းကင်သတိမထားသောပါက, သဘာဝ crazier ဖြစ်ပါသည်, ကဒီဂြိုဟ်ပေါ်ရှိသတ္တဝါအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုလူအပေါင်းတို့အားဘာလုပ်တယ်မှကြွလာသောအခါသဘာဝအားခေတ္တရပ်နားလိုက်ပေးထားရမည်,"ဟုသူကဆိုသည်.
အဆိုပါ neurosurgeon, အီတလီနိုင်ငံရဲ့ Turin အဆင့်မြင့် Neuromodulation Group ၏, သူ့ရဲ့နားထောင်လှုံ့ဆော်ဖို့ကြိုးစားနေအကြား veered, နက်ရှိုင်းသော neurobiology သို့တူးနှင့်သူ့ကိုရှေ့တွင်စုဝေးစေအဖြူရောင်ဆံပင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များ goading. တစျခြိသူလကိုဆင်းသက်ဖို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းရဲ့အနာဂတ်အောင်မြင်မှုရဲ့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, သူ့ကိုနောက်ကွယ် screen ပေါ်မှာ JFK ၏ပုံရိပ်တစ်ခုနှင့်အတူ.
"ကျနော်တို့ကကျနော်တို့နေသောစမ်းသပ်ရန်လကိုမှသွားရမယ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်ရန်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုစမ်းသပ်ရန်, ငါတို့ယောက်ျားဘယ်လိုမြင်ဖို့!"ဟုသူကဆိုသည်.
"ကျနော်တို့ကအမေရိကတိုက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ကလုပျဆောငျရမညျ! ငါတို့သည်သင်တို့နေဆဲအမေရိကန်များလျှင်တွေ့မြင်ရမည်! ကျနော်ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါအမေရိကတိုက်ထိပ်ခဲ့ပါတယ်။ "
"အမေရိကန်ဘီလျံနာ" မှအမြင့်ဆုံးလစာနှင့်ကျောထောက်နောက်ခံကတိပေး, Canavero ပရိသတ်အပြောကြားခဲ့သည်: "ငါသည်သင်ရှိရာသို့လာ; ကိုယ့်ဝမ်းမြောက်စွာဒီနှိမ့်ချဒီဖြစ်နိုင်ခြေသောအမှုလုပ်ကိုသင်တို့ရှေ့မှာလာရန်ဖိတ်ခေါ်လက်ခံကြပါတယ်။ "
နှိမျ့ခခြွငျးပရိသတ်ကို Canavero အတွက်ခံစားသလိုပဲတဲ့အရည်အသွေးနဲ့မဟုတ်ခဲ့.
"လူမျိုးအပေါင်းတို့၏သင်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပါယ်သဘောများ, မရဲ့လှည့်,"ဟုမေးသည့်အတွက်မေးခွန်းအရိုက်ခံဖို့ပထမဦးဆုံးဆရာဝန်ကပြောပါတယ်&တစ်ကြိမ်မြောက်. "ဘာမိမိကိုယ်ကိုလူနာသည်? အသစ်ကခန္​​ဓာကိုယ်, သို့မဟုတ်သူနှင့်အတူခံစားနေရသောကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်?"
Valery Spiridonov, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆဲခံရခြင်းကိုဆန္ဒအလျောက်သိရသည်သောသူ, ကိုသိမ်းမှာအနည်းငယ်သာစကားပြော, ဒါပေမဲ့သူကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားကိန်းဂဏန်းကြီး. Spiridonov Werdnig-ဟော့ရောဂါရှိပါတယ်, သို့မဟုတ်ကျောရိုးကြွက်သား atrophy. ဒါဟာ debilitating င့်, 30 နှစ်အရွယ်ရုရှားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမြင်သာသေဆုံးသူယူကြောင်းကိုနောက်ဆုံးမှာဆိုးဝါးအခြေအနေ. ဆရာဝန်၏ပရောဂျက်သတင်းစာအာရုံစိုက်လက်ခံရရှိရန်စတင်သောအခါအ Spiridonov အပြာရောင်ထဲက Canavero မေးလ်ပို့ပေး.
Valery Spiridonov: '' ငါ့ကိုယ်ငါမရွှေ့ပြီချင်သောကိုယ့်စက်ပြင်ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည် '' ဓါတ်ပုံ: Corbis
အခြားဆရာဝန်များ, Canavero ကပြောပါတယ်, အစွန်းရောက်ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုနှင့်ကိုယ်လက်အင်္ဂါအစားထိုး၏မြင့်ပယ်ချ rate ကအပြည့်အဝ-ခန္ဓာကိုယ်အစားထိုးလူနာကသူ့စိတ်ကိုထွက်သွားစေခြင်းငှါဆိုလိုခြင်းငှါဖြစ်စေမေးခွန်းထုတ်တယ်. Canavero Spiridonov ရဲ့နေရာအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့စိတ်ကူးသူတို့ကိုပြောခဲ့.
"သင်သည်သင်၏အခြေအနေရူးသွပ်ခြင်းမှသင်မောင်းနှင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်ပါ့, ရူးမှ?"ဟုသူက Spiridonov ဟုမေး.
"ဟုတ်တယ်,"Spiridonov replied. "နေ့တိုင်း။ "
အခြားမေးခွန်းတစ်ခု, ဟုတ်ပါတယ်, စစ်ဆင်ရေးဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိသို့မဟုတ်မဟုတ်ပါဘူး. Canavero အောင်မြင်စွာတရုတ်နိုင်ငံအတွက်ဖျော်ဖြေကြွက်တွေမှာအစားထိုးခေါင်းမှထောက်ပြ, နှင့်နိုငျလှနျ glycol ကပြောပါတယ် (ချိတ်) - အရာမကြာခဏ laxative အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်, ဒါပေမဲ့ကျောရိုးဒဏ်ရာလူနာတွေအတွက် applications များရှိသည်တွေ့ရှိရတယ်လို့ - သူတို့ပြတ်ခဲ့ပြီးနောက်အခြေခံအားအောင်မြင်စွာပြန်အတူတကွကျောရိုး၏မော်တာစင်တာများကော်တယ်.
One ကိုဆရာဝန်ကြောင်းထောက်ပြဖို့သူ့ဟောပြောပွဲအလယ်၌ Canavero ပြတ်တောက်, တစ်သွေးကြောခွဲစိတ်ဆရာဝန်အဖြစ်, သူစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့, အခြားသူများအကြား, ထိုနောက်ပိုင်းကျောရိုးသွေးလွှတ်ကြော.
"ခင်ဗျားညာဘက်ကြောင်းများမှတဆင့်ဂုဏ်နဖြတ်တောက်မှုင်,"ဟုသူကဆိုသည်. Canavero သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့ပူးပေါင်းဖို့သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်, သူသည်မိမိအအစိတ်အပိုင်းပြုသည်ခဲ့ကြောင်းနှင့်ယခုအခါသူတို့ကိုဖွင့်ပေးဖို့အတွက်လည်းအချိန်ကြီး ဆို..
"ကျွန်တော်မသိပါဘူး,"အော်စကာ Tuazon ကပြောပါတယ်, အနီးအနားလက်ဇန္ဒြီးယားအခြေစိုက်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်. "လူတှငျ, အဓိကအရာဦးခေါင်းကား! အလောင်းကို့မူဘောင်သို့မဟုတ်တစ် shell ကိုဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့်အရေးကြီးသောရဲ့ဦးခေါင်းကိုဖွင့်. ဖြစ်နိုင်စရာ, ဖွင့်ဟုမဆိုစေ, တစ်စုံတစ်ယောက်ကသည်ကြီးမြတ်လျှင်, အိုင်းစတိုင်းနဲ့တူ, ကိုယ်သင်သူ့ကိုထိန်းသိမ်းရန်နိုင်တယ်။ "
Tuazon Edith Tuazon နှင့်အတူကွန်ဖရင်တက်ရောက်ခဲ့သည်, တစ်ဦးသူနာပြုနှင့်သူ၏ဇနီး 44 နှစ်ပေါင်း. သူမသည် unconvinced ကြီး.
ဒါကြောင့်ဝေးသွားတယ်နဲ့တူ "ငါသည်ခံစားမိပါဘူး,"ဟုသူမကဆိုသည်. "သင်အနုပညာသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့င့်သောသူတစ်စုံတစ်ဦး၏တစ်ဦးဦးခေါင်းအစားထိုးပြီဆိုပါစို့နှင့်အနုပညာသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့မယ့်သူတစ်ဦးမှပေါ်ကြောင်းလူတစ်ဦးကိုလက်နက်နှင့်လက်နေဆဲဆွဲစေနိုင်မည် -will? လက်တော်နေဆဲ '' စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်?ရှေ့မှာပြုလေ၏တူ '' ဒါကြောင့်စဉ်းစားတော်မူမည်? ဘယ်လိုသမျှသောသူတို့သည် functions တွေအတူတကွလုပ်ဆောင်သွားကြသည်?"
Canavero ဆွေးနွေးတင်ပြချက်အတွက်တအားမိမိအဖြေခဲ့တယ်: "သင်တို့သည်ဖြတ် spaghetto, သင်တံစို့လျှောက်ထား, နှင့်အလုံးအရင်းနဲ့။ "
26039	0 အပိုဒ်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနများ, သတင်း, ဆမ် Thielman, သိပ္ပံ, အမေရိကန်သတင်း, ကမ္ဘာ့ဖလားသတင်း
← လေ့လာမှုအသစ်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်စိတ်မကျန်းအကြားမျိုးရိုးဗီဇ link ကိုရှာတွေ့မှဆိုပါတယ် အဆိုပါ 11 သငျသညျလုံးဝလာမည့်နှစ်တွင်လက်လွတ်မနိုင် PlayStation ဂိမ်း →